Dukaanka Font: 20 nooc oo ku habboon mashaariicdaada | Abuurista khadka tooska ah
Dhammaan noocyada noocyada midkeen kasta, ee kumbuyuutarka ku jira, marwalba way yar yihiin. Waxaa jira mashaariic badan oo kala duwan oo u baahan maadooyin kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah, kuwa ugu cajiibka badan waa farta qoraalka. Cabirka, qaababka iyo midabada. Laakiin kuwa fikradaheena mashruuca ka dhiga kuwa ugu adag ayaa ah kuwan.
Liistooyinka soo socda ee noocyada ah ee aan ku bixinno Hal-abuurka 'Online' ayaa ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan helnay. Dhamaantood waa bilaash, ugu yaraan, markii la qorayo maqaalkan. Sida had iyo jeer dhici karta, xoogaa ka dib, qaarkood ayaa laga saaraa. Ama waxay aadi karaan habka soo dejinta iyagoo u maraya lacag bixin. Sida aan had iyo jeer u difaaco, bixinta shaqo si fiican loo qabtay waa inaysan noqon dhibaato markii aad rabto inaad ku soo celiso iyaga sidoo kale.
1 Farriimaha Serif
1.4 Qoraalka Crimson
2 Gacanta lagu qoray
2.3 Hooska Iftiinka
3 Caday Fonts
3.2 Muuqaaladda Sophie
3.3 Taxadir la'aan
4 Noocyada Tattoo
5 Fariimaha aan caadiga ahayn
5.2 Farsamooyinka Elixia
5.3 Dukaan Koowaad
Lora waa xarfo bilaash ah oo xididdadiisa xididdadeed ku leh. Waxaa markii hore loogu talagalay nooca macdanta 'Cyreal' sanadkii 2011, iyadoo lagu kordhiyay Cyrillic oo lagu daray 2013, waxayna ku timid afar nooc: Regular, Bold, Italic, iyo Bold Italic.
Waxaa dhiirrigeliyay Dala Floda iyo qoyska Bodoni, Butler waa far bilaash ah oo uu naqshadeeyay Fabian De Smet. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu xoogaa casriyeyn ah u keeno xarfaha xarfaha isagoo ka shaqeynaya xargaha xarfaha noocyada 'serif'.
Arvo waa qoys qaabab joomatari ah oo loo yaqaan 'slab-serif' oo ku habboon labada shaashad iyo daabacaadda labadaba. Waxaa loogu talagalay akhrinta, waxaa sameeyay Anton Koovit waxaana lagu daabacay galka font Google oo ah ilo furan oo bilaash ah (OFL)
Waa kuwan qoys ka kooban noocyo bilaash ah oo si gaar ah loogu abuuray wax soo saarka buugga, oo u waxyooday Garamond noocyadiisii ​​hore. Qoraalka 'Crimson Text' waa shaqadii uu ku dhashay magaalada Toronto, naqshadeeye Jarmal ku dhashay Sebastian Kosch, oo sheegay inuu saameyn ku yeeshay shaqadii Jan Tschichold, Robert Slimbach, iyo Jonathan Hoefler.
Gacanta lagu qoray
Farta qoraalka gacmeed ee geesinimada leh waxaa dhiirrigeliyay qaababka xarafka ee halista ah ee laga helay qoraalka caadiga ah ee Tamal. Kavivanar waxaa naqshadeeyay Tharique Azeez, oo ah nashqadeeyaha nooca Sri Lankan fadhigeedu yahay, waana bilaash inuu soo dejiyo.
Amatic waa qaab yar oo gacan ku dabool ah oo ku habboon cinwaannada cinwaannada ama qoraallada gaagaaban. Waxay ku kasbatay caan ku ah bilicsanaanta jilicsanaanta, taas oo la socota shakhsiyadda. Font-ka bilaashka ah waxaa markii ugu horreysay naqshadeeyay Vernon Adams, kahor intaan la cusbooneysiinin oo dib loo eegin Ben Nathan iyo Thomas Jockin. Xilligan, waxay ku shaqeysaa in ka badan 2,400,000 bog internet.
Farshaxanka naqshadeeyaha nooca Kimberly Geswein. Ku habboon ku darista taabashada shakhsi ahaaneed ee mashaariicdaada, qaabkan bilaashka ah wuxuu ka kooban yahay geesaha wareegsan iyo jajab, astaamo nadiif ah. Waxaa hadda lagu heli karaa hal qaab oo keliya, laakiin durba waa la caddeeyay inuu caan yahay.
Cute Punk waxay bixisaa firfircoon, dhalinyaro, iyo gebi ahaanba casri ah oo ku saabsan farta qoraalka. Ku shubista qaabka geesinimo, dareen joomatari ku dhowaad, xarfahaan bilaashka ah waa shaqada Flou, naqshadeeye iyo sawirqaade ka socda Bratislava, Slovakia.
Playlist waa far gacan lagu sawiray oo leh qaabab burush qalalan oo ku yimaada seddex nooc: Script, Caps, and Ornament. Ku habboon naqshadaha sawirada, oo ay ku jiraan boorar, funaanado, iyo alaabooyin kale.
Sophie waa khafiif, saaxiibtinimo iyo waxyar unhinged, hab xiiso leh. Waxaa lagu sharaxay "qoraal gacmeed gacmeed lagu qoray oo leh gunno qurxin macaan," qoyska waxaa ku jira glyphs badan oo luuqado badan leh iyo sidoo kale isku dhafka xarfaha ee bidix iyo midig
Tixraac la'aan waa xarfaha buraashka gacanta lagu qoro oo ay ku jiraan xarfaha waaweyn iyo jilayaasha Latinka ah ee la dheereeyay. Sida kor lagu muujiyey, waxay si fiican ugu shaqeyn laheyd naqshadeynta saameynta biyo-biyoodka, ama daabacan ama shabakadda.
Kust waa far qoraal ah oo gacanta lagu qoray, xarfaha waaweyn, leh muuqaal qalloocan oo waxyar uun kharribmay.
Betty waa mid ka mid ah astaamaha 'tattoo' ee xorta ah ee taariikhda soo jireenka ah, markii 'nin kasta oo dhab ah' lahaa barroosinka badmaaxa iyo 'I heart Mum' oo biceps-kooda la geliyay.
Qoraalkan farta ah ee loo yaqaan 'tattoo script' ayaa ku dhajinaya ruuxa naqshadeynta si loo abuuro wax aad u qabow oo qurux badan. Font-kan bilaashka ahi waa shaqada naqshadeeyaha reer Sweden Måns Grebäck.
Farta kale ee loo yaqaan 'Calligraphic font' oo ku habboon qaabeynta sawirka, 'Serval' waa xayawaan ciil qaba oo qallafsan oo naqshadaysan. Font-kan bilaashka ahi waa shaqada dhiirrigelisay ee Maelle.K iyo Thomas Boucherie.
MOM waa font ay ku dhiirrigelisay tattoo dugsigii hore ee dhaqanka Mareykanka, iyo maamuus u leh farshaxanno waaweyn oo waagii hore ahaa. Qoraalkan bilaashka ah waxaa iska leh Rafa Miguel, oo ah agaasime farshaxan oo fadhigiisu yahay Santo Domingo, Dominican Republic.
Fariimaha aan caadiga ahayn
Nooca faransiiska ah iyo naqshadeeyaha garaafka ah Emmeran Richard wuxuu sameeyay qaab-dhismeedka mustaqbalka mustaqbalka Anurati isagoo horumarinaya degelkiisa. Richard wuxuu abuuray farta isagoo uga dan leh inuu si bilaash ah ugu bandhigo shaqsi ahaan iyo adeegsi ahaanba shacabka, iyo in kuwa kale ay u qaabeeyaan si ay ugu haboonaadaan baahidooda.
Halkan ka degso.
Iyada oo ku saleysan shabakad laba geesood leh, Elixia waa nooc yar oo isku duuban oo leh xoog saarid toosan. Waxaa abuuray farshaxanka iyo naqshadeeye Kimmy Lee sanadkii 2005, waxaana ku jira far waaweyn, yar, lambarro, jilayaal dheereeya, lahjad, iyo qaabab kale.
Gilbert Baker, oo dhintey 2017, wuxuu ahaa u dhaqdhaqaaqe LGBTQ iyo farshaxan yahan caan ku ah abuurista calanka qaanso roobaad ee astaanta u ah, waxaana lagu xasuustaa aaladda indha qabashada leh ee shaashadda. Waxaa loo qaabeeyey cinwaanno banner iyo hal ku dhigyo maskaxda lagu hayo, Gilbert waxaa loo heli karaa inuu yahay font vector caadi ah, iyo sidoo kale font midabkeedu yahay qaabka OpenType-SVG iyo nooc animated ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Dukaanka Font: 20 nooc oo ku habboon mashruucyadaada
Sawir qaadis leh saameyn midabbo badan leh ee Photoshop
Saamaynta muhiimka ah ee muhiimka ah ee Photoshop si dhakhso leh